Iinkonzo zeVisa -Baqulunqi bezigidi
Sibaxhobisela abathengi bethu unyamezelo oluninzi kunye novelwano.
Sinikezela ngezisombululo ezilungiselelwe abantu, iintsapho, amashishini amancinci, iinkampani ezinkulu zehlabathi ezisebenzela wena.
Yabelana ngemfuno yakho nathi kwaye siya kukukhokela njani, kwihlabathi liphela.
Iinkonzo zethu eziphambili
Iinkonzo zethu eziphambili ezinxulumene noNcedo lweVisa
Khetha iLizwe leNkonzo yeVisa
Amazwe aphezulu eVisa
Njengomntu okanye umnini okanye inqununu yeshishini elizimeleyo okanye elihlanganayo, wonke umntu ucelwa umngeni kungekuphela ngenkqubo yokulawula imisebenzi yemihla ngemihla, kodwa, ngokudibeneyo nokuqinisekisa impumelelo yexesha elide kunye nexesha elide lenkampani yabo. Kodwa njengoko iindleko zokwenza ishishini zinyuka kwaye iimfuno zokuthobela zidala imiceli mngeni yokusebenza kakhulu, ungashiywa ucinga ukuba uza kuqhubeka njani nobomi-ungasathethi ke ngokuphumelela - ngeli xesha litsha.
Inkqubo yenyathelo ngeNyathelo -Ukuqala ukuya empumelelweni
Isinyathelo 1: Chonga iimfuno zomntu ngamnye / zoSapho / zeShishini.
Isinyathelo 6: Ingxelo ye-Akhawuntingi kunye neRhafu, ukuba ikhona.
Ezokhenketho kunye neShishini
Abaphambukeli abatyelele eArgentina kukhenketho kunye neenjongo zeshishini banikwa i-visa kwiintsuku ezingama-90 ukufika kwabo, kwaye akukho mfuneko yokuba benze isicelo se-visa kwangaphambili. ke qiniseka ukuba ujongana neNdlu yoZakuzo yaseArgentina okanye iOfisi yeli lizwe ngaphambi kokuba uthathe olo lwazi lolunye ulwazi ungalufumana kwi-Arhente Yezangaphandle.
Unokufaka isicelo sale visa kuphela ukuba ubhalise kwiziko lemfundo eArgentina kwaye uvunyelwe lisebe lokufudukela eArgentina. Ihlala isebenza ide iikhosi oyithathileyo igqitywe ngokusemthethweni, kwaye ayinakuphinda ihlaziywe.
IVisa yeKhontrakthi yaBasebenzi
Le Visa yeyabantu abaceba ukuhlala eArgentina kwaye basebenzela inkampani yaseArgentina ebhaliswe kwinkonzo yokufudukela kwelinye ilizwe, kwaye igunyazisiwe ukuba iqeshe abasebenzi bamanye amazwe. Uninzi lwexesha, ungasifaka isicelo se-visa nokuba ngaphambi okanye emva kokuba ungene kwilizwe.
Nabani na onokungqina isixa esincinci somvuzo wenyanga we- $ 8,500 2,200 ye-ARS elingana ne- $ XNUMX USD, kwaye uqinisekise ngedipozithi yakhe kwiakhawunti yebhanki yaseArgentina unokufaka isicelo soluhlobo lwe-visa. Logama nje umfaki-sicelo enokuveza amaxwebhu aqinisekisa ukuba ingeniso iya kuqhubeka ngelixa behlala eArgentina, banokufaka isicelo seVisa eMali.
Ukufaka isicelo se-Visa Umhlala-phantsi, kanye njenge visa yezezimali, umntu kufuneka afumane umvuzo wobuncinci wokufaka isicelo se-Visa Umhlala-phantsi ufuna ukuba ungqine umrhumo wenyanga we- $ 8,500 2,200 ARS (malunga ne- $ XNUMX USD). Imali kufuneka ifakwe kuyo nayiphi na ibhanki yaseArgentina.
Amaxwebhu ahlala ebuzwa xa usenza isicelo zezi:
Ipasipoti enobungqina bokuba ubuncinci iinyanga ezi-6 emva komhla wokufika
Ifom yesicelo ezalisiweyo
Iifoto zencwadana yokundwendwela emiselweyo
Ukubhukishwa kwamatikiti okujikeleza
Ukubhukisha ihotele okanye ileta yesimemo evela kumhlobo okanye usapho oluhlala eArgentina
Itsheki yokuhlawula intlawulo yesicelo
Ubungqina bemali ukuba umenzi-sicelo uyakwazi ukumxhasa
Amanye amaxwebhu onokubuzwa kuwo abandakanya: isatifiketi sokuzalwa, isatifikethi somtshato sasekuqaleni, isatifikethi soqhawulo mtshato (ukuba sikhona), nawaphi na amaxwebhu atshintshiweyo amagama, njlnjl. ukukhutshwa kwabo, emva koko kuguqulelwa kwiSpanish kwaye kusemthethweni ngokusemthethweni yinkundla yaseArgentina.
Bonke abemi baseYurophu
Abaphethe iipasipoti zala mazwe alandelayo kufuneka basebenzise isatifikethi sokuhamba esikhutshwe yiArgentina endaweni ye-visa xa behamba:
Iriphabliki Ekhululekile yamaArabhu eSahrawi
Kuya kufuneka kwakhona kukhankanywe ukuba kubemi baseBolivia, eBrazil, eColombia, eChile, e-Ecuador, eParaguay, ePeru, eUruguay naseVenezuela inkqubo yokufumana imvume yokuhlala okwethutyana ilula kakhulu, kulula kwaye ayinabunzima. Oku kungenziwa nokuba kukwenziwa ngabameli beArhente yaseArgentina phesheya okanye eArgentina. Ipemethe ihlala iminyaka emibini, kwaye iyahlaziywa.
Sinikezela ngezisombululo ezahlukeneyo phantsi kophahla olunye, intsebenziswano eyi-1 yazo zonke iimfuno zekhaya lakho okanye zokukhula kwehlabathi.
Soloko ukho ukuze uphendule imibuzo yakho, ikuxhase kwiinjongo zakho nakwiminqweno yakho, ikunceda ugcine ixesha kunye nemali.
Iimfuno zabantu bonke azifani, kungoko, sihlala siyila izisombululo ezizezakho, zendlela yakho yokukhula kwihlabathi.
Imirhumo yeenkonzo zethu ikhuphisana kakhulu ngaphandle kweendleko ezifihliweyo, ezisebenza kubo bonke, nokuba ungoyena mntu okanye umncinci, uphakathi okanye yinkampani enkulu.
Kwiminyaka edlulileyo sisebenza nabantu, iintsapho, kunye neenkampani, siphuhlise ulwazi oluphambili kulo lonke uluhlu olubanzi lweenkonzo, kwilizwe jikelele.
Sineqela labadlali abanamava, imibutho kunye namaqabane ukunika ubutyebi bamava kubaxumi bethu.
Singamahlakani, ababoneleli ngeenkonzo, amagqwetha, iiCFP, iiAccountant, iiRaltors, iiNgcali kwezeziMali, iiNgcali zeMigangatho kunye nabantu abanolwazi, abaneziphumo.
Xa ujongene nesigqibo esinzima soze sityeshele amaxabiso kunye nemithetho-siseko. Senza into elungileyo, hayi eyona ilula.
Sikhonza umntu ngamnye, iintsapho kunye neenkampani kwilizwe jikelele, kungoko, zingavusa kunye nokukhulisa ukukhula kwakho kwihlabathi.
Silapha ukwenza lula ukufuduka kwakho, ukukhula, ukwanda kunye neemfuno ngokubonelela ngenqaku eli-1 lokunxibelelana.
Ubukho bethu obahlukileyo kwiimarike eziphambili zehlabathi zinika thina, ingcaphephe yolwazi lwasekhaya esenza sikwazi ukukunika eyona qonga liphezulu lenkxaso.
Iinkonzo zokufudukela kwelinye ilizwe: 22156.
Ukuqhutywa kweenkampani: 26742.
Isigidi sabenzi ngentsebenziswano yamanye amazwe kunye noMbutho kunye neCFA Professional, abaGcini zincwadi, abaNxibelelanisi bezezimali, iQela labaThunyeli beMfuduko, lilawula iphothifoliyo enkulu kakhulu yababhatali beRhafu kunye nemibutho yamashishini yamanye amazwe esebenza phantse kuwo onke amagunya nabathengi abaphindayo abanokuxhasa ixesha elide. ubudlelwane nabaxumi bethu iminyaka emininzi ngenxa yenkonzo egqwesileyo, uvelwano kunye namaxabiso okhuphiswano.
Sinikezela ngenkonzo yobalo kunye / okanye neenkonzo zophicotho kumashishini oshishino lwamazwe aphesheya abandakanywe kulawulo olukhankanyiweyo ngezantsi:
Ukuba ujonge phambili kwiinkonzo zeAccounting kunye nezoPhicotho zincwadi kulo naliphi na ilizwe, ezingadweliswanga kwiwebhusayithi yethu nceda uqhagamshelane nathi ngqo nge-imeyile.
info@millionmaker.com Okanye umnxeba I-Austria +43720883676, IArmenia +37495992288, ECanada +16479456704, EPoland +48226022326, I-UK +442033184026, I-USA +19299992153okeraXNUMX
Asixhasi okanye aboneleli ngeenkonzo zethu kwezi zigaba zichaziweyo zingezantsi kubantu abathile kunye / okanye kumashishini:
Nasiphi na isixhobo esinokukhokelela ekusetyenzisweni gwenxa kwamalungelo oluntu okanye sisetyenziselwe ukuphathwa gadalala.
Urhwebo, ukuhambisa okanye ukuvelisa iingalo, izixhobo, imipu, i-mercenary okanye ikhontrakthi yokuthengisa.
Uqwalaselo lobuchwephesha okanye izixhobo zokubulala okanye izixhobo zokwenza imveliso.
Nayiphi na imisebenzi engekho mthethweni okanye yolwaphulo-mthetho okanye yabantu (abantu) abamnyama edweliswe phantsi komthetho welinye ilizwe.
Izinto eziyingozi okanye eziyingozi zebhayiloji, izixhobo zeekhemikhali okanye zenyukliya eziquka, izixhobo okanye oomatshini abasetyenziselwa ukwenza, ukuphatha okanye ukulahla izinto ezinjalo.
Ukurhweba, ukugcinwa okanye ukuhambisa izinto zoluntu okanye izilwanyana, ukuxhatshazwa kwezilwanyana okanye ukusetyenziswa kwezilwanyana kulo naluphi na uvavanyo lwenzululwazi okanye lwemveliso.
Iiarhente zokuthathwa kwabantwana abancinci, kubandakanya neenkqubo zokutshatisa kwabazali okanye naluphi na uhlobo lokuxhaphaza amalungelo abantu;
Iicawa zonqulo kunye nezibonelelo zabo.
Imisebenzi yeshishini, ethi yimithetho nemigaqo yelizwe yokuqulunqwa kweQumrhu iphantsi kwemvume kwaye iqhutywa ngaphandle kokufumana iphepha-mvume.
Iingcebiso malunga noCwangciso lobuchule
Isicwangciso senkqubo yokufuduka ngobuchule enokukunceda ukuba ufezekise iinjongo zakho zokuhamba zehlabathi kunye neminqweno yakho ngexesha elifanelekileyo nangeendleko.
UkuBamba ngesandla kunye noMonde
Siqonda kakuhle ukuba yonke le nkqubo yeyakho kunye nekamva losapho lwakho kwaye uya kufuna isikhokelo kunye nokubamba ngesandla kuyo yonke inkqubo. Sukuba nexhala lokuba ukhona ngenxa yakho!
Siyaqonda ukuba ukufuduka kuhlala kuyinto eyinkimbinkimbi kwaye sikholelwa ukuba ubudlelwane bokwenyani kubandakanya ukwabelana ngolwazi. Kwizigidi ezisisigidi sababonelela ngoqeqesho lwabathengi bethu ngezihloko ezahlukeneyo zokufudukela kwelinye ilizwe. Sisebenza ngomonde kakhulu nabaxumi bethu.
Ngamaxesha athile sihlangana nomthengi wethu okanye sinenze ividiyo yokwenza ingqungquthela, kuxhomekeke kubukho babo. Ezi ntlanganiso ziinjongo zeshishini, imigaqo-nkqubo okanye iinkqubo ezinokuthi zichaphazele inkqubo yabo yokufika, ukuhlalutya kunye nokumisela uhlengahlengiso lwenkqubo. Asibizi nantoni na eyongezelelweyo ngenxa yokubonisana kunye neentlanganiso.